Lumkela into eyenziwa lulutsha kuFacebook | Iindaba zeGajethi
Iindaba ze-Facebook | | I intanethi
UKovi Dunbar, imodeli yokufikisa wanyamalala kwiintsuku ezili-10 ezidlulileyo ezandleni zendoda awadibana nayo kuFacebook, sele ebuyile nabazali bakhe.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uluntu olukwi-intanethi lwashukunyiswa ziindaba zokunyamalala kwendlovukazi entle. Kwakucingelwa ukuba angalixhoba lokuxhwilwa ezandleni zendoda awayenokudibana nayo kuFacebook.
Ngethamsanqa, umntwana sele enikezelwe kubazali bakhe ngamapolisa kwaye kubonakala ngathi konke yayikukuthabatheka okuqhelekileyo; imixholo yentliziyo ekhokelela ulutsha ukuba lwenze izinto eziphambeneyo.
Ngaphandle koko, luphawu lwesilumkiso kubazali ngokuchasene neengozi ezinokubakho kwinethiwekhi yoluntu i-Facebook nakwezinye iinethiwekhi. Ngethamsanqa, uKovi ulungile kwaye akukho nto anokuzisola ngayo eyenzekileyo, kodwa oko ngekhe kusoloko kunjalo.
1 I-Facebook inokusetyenziswa ngabaxhaphazi ngokwesondo
2 Benza ntoni abazali ukuthintela abantwana bethu ekubeni ngamaxhoba abaxhaphaza ngokwesondo kwiinethiwekhi zonxibelelwano?
2.1 Ngokuzazisa okungeyonyani.
2.2 Ngeentengiso ezinomdla kulutsha.
2.3 Iifoto zeprofayili ezixhasayo.
2.4 Ngezithembiso (zobuxoki) zemali, umsebenzi wobugcisa okanye ukumodareyitha.
I-Facebook inokusetyenziswa ngabaxhaphazi ngokwesondo
Kwi-Intanethi- njengakuyo yonke indawo- kukho izinto ezinganyanisekanga nezingenantliziyo ezihamba zifuna ulutsha olungazinzanga. Ngabantu abadumileyo abaxhaphaza abantwana ngokwesondo, abathi ngaphezu kwesihlandlo esinye bazise iintlungu nelishwa kwiintsapho kwihlabathi liphela.
Batyekele ekubonakaleni njengabangenabungozi kwaye kwiimeko ezininzi bajongela phantsi ukuzikhusela kwexhoba elinokubakho, ukufumana ukuthembakala kwabo kancinci kancinci. Yinkqubo enokuthatha iiveki, kwaye ubulele ukulunga- akusoloko kusebenza kubo. Kodwa kwimeko apho baphumelela khona, amaxhoba ngekhe abuyele ekhaya.
Benza ntoni abazali ukuthintela abantwana bethu ekubeni ngamaxhoba abaxhaphaza ngokwesondo kwiinethiwekhi zonxibelelwano?
Njengomzali olindeleyo- isizathu sokuba ndingabhali rhoqo - ndiyakholelwa ukuba abantwana bafuna inqanaba elithile lolawulo, kodwa ngaphaya koko, ulwazi lokuqala esinokubanika lona lubalulekile ukubathintela ekubeni ngamaxhoba ezi zilwanyana .
Ngokwendalo, oosomashishini abasasaza imithombo yeendaba zentlalo bayazi ngobungozi obunokuveliswa ngezi zixhobo zonxibelelwano zinamandla. Ukuba zizixhobo, zinokusetyenziselwa okuhle okanye okubi. Nangona kunjalo, kufanelekile ukugxininisa ukuba elona nyathelo lisemthethweni nelisebenzayo lelona liqala ekhaya. Kwaye kulwazi oluchanekileyo apho ububi obukhulu bunokuthintelwa.
Umzekelo, abakwishumi elivisayo kufuneka baziswe ngeendlela ezininzi ekunokufikelelwa kubo kwezi zifundo. Ezinye zezo ndlela zichaziwe apha ngezantsi.
Banokuya kwinkwenkwe / intombazana benesazisi esingeyonyani, umzekelo, njengomnye okwishumi elivisayo okanye njengomntu omdala nobonakala engenabungozi.
Ngeentengiso ezinomdla kulutsha.
Umzekelo, uxela ukuba umculo wasimahla okanye amatikiti ekonsathi yasimahla anikezelwa okanye olunye uhlobo lwesibhengezo olutsala umdla wolutsha. Emva koko bakucela indlela ethile yokunxibelelana; Umzekelo, i-MSN okanye olunye uhlobo lomyalezo.
Iifoto zeprofayili ezixhasayo.
Abaxhamli banokuthumela iifoto-hayi rhoqo kubo-ukucebisa ulutsha oluhle kwaye babonise ukuba bafuna ukuthandana namantombazana / amakhwenkwe afanayo.
Ngezithembiso (zobuxoki) zemali, umsebenzi wobugcisa okanye ukumodareyitha.
Mhlawumbi bobona buchule busetyenziswa kakhulu ngamarhamncwa. Kuyaziwa ngamatyala kwamanye amazwe apho kuye kwasekwa izifundo ezisebenza kunye neemvume zokusebenza kodwa zanikezelwa ekuphathweni gadalala kwabakwishumi elivisayo abeza ngolu hlobo lwesithembiso.
Ezi zezinye zeendlela endikhe ndazibona izilwanyana zisebenza kwiminyaka edlulileyo kwiwebhu. Kodwa, ndiqinisekile ukuba zinokubaninzi ngakumbi, nangayiphi na imeko ukuba umfundi unolwazi olungakumbi ngesihloko, nceda ushiye kumagqabantshintshi ukuze ahlaziye iposti. Bubomi nengqibelelo yabakwishumi elivisayo nabantwana bethu esithetha ngabo.
Kuya kufuneka sifundise abantwana bethu abakwishumi elivisayo ukuba bakugatye konke ukudibana okunokwenzeka nabanye abantu abadibene nabo kwinethiwekhi.
teeniingozi kwiinethiwekhi zonxibelelwanothintela iingozi kulutsha kwimidiya yoluntu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I intanethi » Lumka okwenziwa lulutsha kuFacebook
Ewe, eli phepha likhokela abazali kwaye libazi ubungozi obuqhubekayo babantwana bethu kwaye ngamanye amaxesha umntu akabazi kuba abanalo uqhelwaniso lokuba yintoni yonke le nto malunga ne-intanethi, enkosi ruth
KWI-GUARATARO DEL GUAIRE sitsho
Kumnandi kakhulu kum ukuzisa kwimemori kunye novakalelo oluphezulu lobuntu boogxa bam endibathandayo, abasebenzisanayo kule ndlela intle nenomdla yokunxibelelana, ulonwabo olukhulu oluvela kwelinye lamatye anqabileyo angenakuphikiswa okuphefumlelwa kwendalo, okunongwe ngononophelo Izikhokelo zokusingqongileyo kwaye zimiselwe ukukhuthaza uthando lwethu kuMama weNdalo ezichongwe njengezi: "ILETA ESEZIHLALWENI EZIYINTLOKO ZIYA KUMONGAMELI WEUNITED STATES" onomxholo endizivumela ukuba ndikhuphele ngolu hlobo lulandelayo:
“UMongameli wase-United States, uFranklin Pierce, wathumela isithembiso ngo-1854 kuChief Seattle, wesizwe samaSuwamish, ukuba athenge kuye iMimandla ekuMantla-ntshona aseMerika namhlanje ebumba iState Washington. Ukubuya, umlawuli ohloniphekileyo uthembisa ngokwenza "ugcino" kubantu bomthonyama. Ngo-1855 u-Chief Seattle uphendula uMongameli uFranklin Pierce ”ngokubhekisele kwezi zinto zilandelayo:
“(…) INkosi eNkulu eNkulu yaseWashington iyalele ukuba isazise ukuba ifuna ukuthenga umhlaba kuthi. Inkosi eyiNtloko emhlophe ikwathumele nathi amazwi obuhlobo kunye nentando entle. Siyabuxabisa kakhulu obu bubele, kuba siyazi ukuba ubuhlobo bethu abenzi nto ingako kuwe. Siza kusithathela ingqalelo isicelo sakho kuba siyazi ukuba, ukuba asenzi njalo, umlungu angafika nemipu yakhe asithabathe imihlaba yethu. I-Great White Chief yaseWashington iya kuba nakho ukulithemba ilizwi likaChieftle ngokuqiniseka okufanayo ukuba ulindele ukubuya kwezikhululo. Njengoko iinkwenkwezi ezingatshintshiyo zingamazwi am, ungathenga njani okanye uthengise isibhakabhaka okanye ubushushu bomhlaba? Lowo ngumbono ongaqhelekanga kuthi. Ukuba akukho mntu unokufumana umoya omtsha okanye ubumanzi bamanzi, kunokwenzeka njani ukuba uphakamise ukuwathenga? Zonke iziqwenga zalo mhlaba zingcwele kubantu bam. Lonke isebe eliqaqambileyo lomthi wompayini, sonke isandla esisentlabathi elunxwemeni, ubumnyama behlathi elishinyeneyo, yonke imitha yokukhanya kunye nokugquma kwezinambuzane kungcwele kwimemori nakubomi babantu bam. Incindi ehamba ngemizimba yemithi ihamba nembali yolusu olubomvu. Abafileyo bomlungu bayalibala umhlaba wabo wemvelaphi xa behamba ukuhamba phakathi kweenkwenkwezi. Abafileyo bethu abaze bawulibale lo mhlaba mhle, kuba ngumama wendoda enesikhumba esibomvu. Siyinxalenye yomhlaba kwaye iyinxalenye yethu. Iintyatyambo ezinuka kamnandi ngoodade wethu; ixhama, ihashe, ukhozi olukhulu, ngabazalwana bethu. Iincopho ezinamatye, imisele efumileyo yasemaphandleni, ubushushu bomzimba we-esile nendoda, zonke ezo zinto zezusapho olunye. Ngesi sizathu, xa uMlawuli oyiNtloko eMhlophe eWashington ethumela umyalezo wokuba ufuna ukuthenga umhlaba wethu, ubuza okuninzi kuthi. Inkosi eyiNtloko emhlophe ithi iyakusigcinela indawo apho singahlala sonelisekile. Uya kuba ngutata wethu thina sibe ngabantwana bakhe. Ke ngoko, siya kuqwalasela umnikelo wakho wokuthenga umhlaba wethu. Kodwa oko akuyi kuba lula. Lo mhlaba ungcwele kuthi. La manzi aqaqambileyo abaleka imilambo kunye nemilambo ayingawo amanzi nje, kodwa ligazi lookhokho bethu. Ukuba umhlaba siyakuthengisa, kufuneka ukhumbule ukuba ungcwele, kwaye kufuneka ufundise abantwana bakho ukuba ungcwele kwaye ukubonakaliswa ngakunye kumanzi acocekileyo amachibi kuthetha ngeziganeko kunye neenkumbulo zobomi babantu bam. Ukumbombozela kwemilambo lilizwi lezinyanya zam. Imilambo ngabazalwana bethu, bayanelisa ukunxanwa kwethu. Imilambo ithwala amaphenyane ethu kwaye ityisa abantwana bethu. Ukuba siyakuthengisa imihlaba yethu, kufuneka ukhumbule kwaye ufundise abantwana bakho ukuba imilambo ngabantakwethu, kwaye yeyakho nayo. Ke ngoko, kuya kufuneka unike imilambo ububele obungabunikela kuye nawuphi na umzalwana. Siyazi ukuba umlungu akawaqondi amasiko ethu. Kuye isiqwenga somhlaba sinentsingiselo efanayo nayo nayiphi na enye, kuba ingumntu wasemzini oza ebusuku kwaye acaphule emhlabeni into ayifunayo. Umhlaba asingodade wabo kodwa lutshaba lwakhe, kwaye xa sele ewoyisile, uqhubeka nendlela yakhe. Ushiya ngasemva amangcwaba ookhokho bakhe kwaye akakhathali. Uyeba emhlabeni into ebiya kuba ngabantwana bakhe kwaye akakhathali. Umngcwabo kayise kunye namalungelo abantwana bakhe alibalekile. Uphatha umama wakhe, umhlaba, umntakwabo, kunye nezulu njengezinto ezinokuthengwa, ukuphangwa, ukuthengiswa njengeenkunzi zeegusha okanye izivatho ezimibalabala. Umnqweno wakhe wokudla uya kuwudla umhlaba, ashiye ngasemva intlango. Andiqondi, amasiko ethu ahlukile kwawakho. Mhlawumbi kungenxa yokuba ndingenangqondo kwaye andiqondi. Akukho ndawo izolileyo kwizixeko zabelungu. Akukho ndawo apho unokuva khona ukudubula kwamagqabi entwasahlobo okanye ukubhabha kwamaphiko ezinambuzane. Kodwa mhlawumbi kungenxa yokuba ndiyindoda yasendle kwaye andiqondi. Ingxolo ibonakala ngathi ithuka iindlebe kuphela. Yintoni eseleyo ebomini ukuba umntu akasiva isikhalo sentaka esisithukuthezi okanye ingqushu yasebusuku yamasele ejikeleze ichibi? Ndiyindoda ebomvu yolusu kwaye andiqondi. I-Indiya ikhetha ukumbombozela okuthambileyo komoya ovuthuza umphezulu wechibi, kunye nomoya ngokwawo, ococwe yimvula yasemini okanye uqholo lweepayini. Umoya ubaluleke kakhulu kwindoda enesikhumba esibomvu, kuba zonke izinto zabelana ngumoya ofanayo-isilwanyana, umthi, indoda-zonke zabelana ngomphefumlo omnye. Kubonakala ngathi umlungu akawuva umoya awuphefumlayo. Njengomntu ofayo uba ndindisholo kukunuka. Kodwa ukuba umhlaba siwuthengisela umntu omhlophe, kufuneka akhumbule ukuba umoya ubalulekile kuthi, kwaye loo moya wabelana ngomphefumlo wawo nobomi obuxhasayo. Umoya owanika ootatomkhulu bethu ukuphefumla kokuqala nabo bafumana umphefumlo wabo wokugqibela. Ukuba siyakuthengisa umhlaba wethu, kufuneka uwugcine uphelele kwaye ungcwele, njengendawo apho nomlungu ngokwakhe angawuva umoya oswiti ziintyatyambo. Ke ngoko, siza kucamngca ngesithembiso sokuthenga umhlaba wethu. Ukuba sithatha isigqibo sokwamkela, ndiza kubeka imeko: umntu omhlophe kufuneka aphathe izilwanyana zalo mhlaba njengabantakwabo. Ndiyindoda yasendle kwaye andiqondi ngenye indlela yokwenza. Ndabona iinyathi eziliwaka zibola ethafeni, zilahlwe ngumlungu owazidubula kuloliwe owayedlula. Ndiyindoda yasendle kwaye andiqondi ukuba ihashe lesinyithi elitshayayo linokubaluleka ngaphezu kwenyathi, esincama ngayo ukuze siphile. Yintoni indoda engenazo izilwanyana? Ukuba zonke izilwanyana bezinokuhamba, umntu angafa sisizungu esikhulu somoya, kuba okwenzeka kwizilwanyana kungekudala kuza kwenzeka ebantwini. Kukho umanyano kuyo yonke into. Kuya kufuneka ufundise abantwana bakho ukuba umhlaba ophantsi kweenyawo zabo luthuthu loomawokhulu babo. Ukuhlonipha umhlaba, xelela abantwana bakho ukuba wawutyebisiwe bubomi babantu bethu. Fundisa abantwana bakho oko sikufundisa thina, ukuba umhlaba ngumama wethu. Yonke into eyenzekayo emhlabeni iya kwenzeka kubantwana bomhlaba. Ukuba amadoda atshica emhlabeni, ayazitshica. Nantsi into esiyaziyo: umhlaba asingowamntu; ngumntu wasemhlabeni. Nantsi into esiyaziyo: Zonke izinto zinxulumene njengegazi elidibanisa usapho. Kukho umanyano kuyo yonke into. Kwenzeka ntoni emhlabeni kuya kuwa kubantwana bomhlaba. Umntu akazange aluke ilaphu lobomi; ungomnye wemisonto yakhe. Nantoni na ayenzayo kwilaphu, uya kuyenza kuye. Nokuba umhlophe, oThixo wakhe ahamba ethetha njengaye, ukusuka kumhlobo ukuya kumhlobo, akanako ukuxolelwa kwinjongo efanayo. Kungenzeka ukuba singabantakwenu, ngaphandle kwayo yonke into. Siza kubona. Inye into siqinisekile ukuba umntu omhlophe uya kuthi ngenye imini afumanise: uThixo wethu nguThixo ngokwakhe. Unokucinga ukuba ungumnini, njengoko unqwenela ukuwuhlutha umhlaba wethu; kodwa akwenzeki, UnguThixo womntu, kwaye imfesane yakhe iyafana kumntu onolusu olubomvu njengakwindoda enebala elimhlophe. Umhlaba uxabisekile, kwaye ukuwudelela kukudela umenzi wawo. Abamhlophe nabo baya kudlula; mhlawumbi ngokukhawuleza kunezinye izizwe. Ungcolise iibhedi zakho kwaye ngobusuku obunye uyakucinywa yinkunkuma yakho. Xa basihlutha umhlaba, uyakukhanya ngokuqaqambileyo ngamandla kaThixo okuzise kula mazwe kwaye ngenxa yesizathu esithile wakunika ulawulo phezu komhlaba naphezu kwendoda ebomvu. Eli phupha liyimfihlakalo kuthi, kuba asiqondi ukuba inyathi iyatshatyalaliswa, amahashe asendle alanyiwe onke, iikona ezifihlakeleyo zehlathi elishinyeneyo zimiliselwe livumba lamadoda amaninzi kunye nombono weentaba ezithintelwe yimisonto yentetho. Kwenzeke ntoni kwihlathi elishinyeneyo? Wanyamalala. Kwenzeka ntoni ngokhozi? Wanyamalala. Ubomi buphelile.
Umdla wokutya ibon!
Phendula GUARATARO DEL GUAIRE
Molo, uyazi, ndinephepha elitshatileyo ngu habbo, ndiza kukunika umtshato ok, www.habbo.es, lowo kwaye uya kundifumana, ndingu michellit @@@ ku habbo
iguarataro del guaire sitsho
NDANDICINGA UKUBA NDANDIBONA KWI-INSANITY OF VENESSION A PIR OF MOODLETUOUS COMICS ETHETHAYO ETHETHA I-PISTOALADAS ZISUKA E-VENEZUELA KUNYE NAMAZIKO AYO, NGOKUQHELEKILEYO KWIMBONAKALO YOBUGWEBI; KODWA YINTONI UKUDABUKA! NDIWAQONDE KUPHELA NGAMAZWI AMI OKUKHETHA NANGOKUQHELEKILEYO KWEIMIBUTHO ZABO ZENGQONDO EBONAKALISWE EMEHLO ABO; Andikwazi ukukholelwa ukuba abo badlulayo sele bedlulile X-RAYS YAMAKHULU EMEKHAYA KODWA NGENXA YOKUBONAKALA KWABO BOMZIMBA. KUPHELA KUKUQHELEKA, UKUKHANYA KANYE NE-PIO-PSYCHO-SOCIAL ANGUISH KUNOKWENZA UKUTHUTHA NGOKUGQITHISILEYO KWE-70 KGS. YOKUTHUNYELWA KOMZIMBA WOMZIMBA, UKWAZI UKUKHOKELELA IGQWETHA TAMAYO KUNYE NEMITU PERUNZ OSUNA KWIINTLEKELE EZI.
Kutheni iinkampani kufuneka zityalomali kuFacebook